Ony, 21 taona : Tsia, rehefa manao maquillage fotsiny aho no mampiasa démaquillant fa tsy mahavatra aho. Mamanay koa miteny fa mbola aloha loatra izao raha hikitika tarehy aho dia avelako amin’izao aloha.
Karena, 28 taona: Ie, tsy maintsy manao izany aho satria efa be loatra ny loto eto an-drenivohitra. Rehefa mody amin’ny hariva surtout, tsy maintsy diovina ny tarehy fa mipetaka eny avokoa ny setroka, ny hatsembohana. Na dia tsy hanosotra produit aza aho dia manasa tarehy tsara fotsiny amin’ny hariva.
Miora, 34 taona : ilaina ilay izy dia manao aho fa indraindray tsy mahavatra. Rehefa malalaka aho dia manamboatra fanadiovana tarehy na masque natoraly amin’ny tarehy. Amin’ny andavanandro dia manadio tarehy sy manosotra crème de jour no tena fahazarako.